नेपालगञ्जमा सञ्चालित ‘सोल्टी वेस्टेण्ड प्रिमियर’ होटलले पाँचतारे होटलको मान्यता पाएको छ । वासुदेवपुरमा एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको उक्त होटलले पर्यटन विभागबाट हालै पाँचतारेस्तरको प्रमाणपत्र पाएको हो । विभागले होटलको पूर्वाधारको अनुगमनपछि पाँचतारेको लाइसेन्स दिएको हाटलका प्रबन्ध निर्देशक इन्द्र खड्काले जानकारी दिए । नेपालगञ्जमा सञ्चालित ‘सोल्टी वेस्टेण्ड प्रिमियर’ होटलले पाँचतारे होटलको मान्यता पाएको छ । वासुदेवपुरमा एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको उक्त होटलले पर्यटन विभागबाट हालै पाँचतारेस्तरको प्रमाणपत्र पाएको हो । विभागले होटलको पूर्वाधारको अनुगमनपछि पाँचतारेको लाइसेन्स दिएको हाटलका प्रबन्ध निर्देशक इन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।सरकारले काठमाडौँ बाहिरका होटलका लागि मापदण्ड हेरफेर गरेपछि अहिलेकै पूर्वाधारमा होटलले पाँचतारेका लागि आवेदन दिएको थियो । नेपालकै पहिलो हरित (ग्रिन) होटल दाबी गरिएको सो होटलले प्रयोगमा ल्याएको सम्पूर्ण प्रविधि पूर्ण वातावरणमैत्री छ । सोल्टी वेस्टेण्ड प्रिमियर कार्बनडाइअक्साइड न्यून मात्रामा उत्सर्जन गर्ने र कम ऊर्जा खपत गर्ने नेपालकै पहिलो होटल मानिएको छ ।खड्काका अनुसार बिएमएक (बिल्डिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम), जिरो कार्बनफुटप्रिन्ट, वातावरण अनुकूलनका लागि रेडियन्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग, होटलबाट निस्कने फोहरलाई प्रशोधन गरी तरल पदार्थलाई पानीका रूपमा ट्वाइलेटको फलस, बगैँचा र चिलर प्लान्टलाई कुलिङ गर्नका लागि प्रयोग गरिनुका साथै ठोस वस्तुलाई प्राङ्गारिक मलका रूपमा प्रयोग गर्नु होटलको विशेषता हो ।काठमाडौँको होटेल सोल्टी क्राउन प्लाजा लिमिटेडकै भगिनी संस्थाका रूपमा नेपालगञ्जमा सोल्टी वेस्टेण्ड सञ्चालनमा आएको छ । पाँचतारे होटलको मान्यता पाएपछि सोल्टी वेस्टेण्डमा अब लाइभ क्यासिनो सञ्चालनमा आउनेछ । अहिले मिनी क्यासिनो चलाइरहेको होटलमा काठमाडौँको सोल्टीमा क्यासिनो चलाइरहेको महाजनले नै चलाउने बताइएको छ । नेपालमा लाइभ क्यासिनो चलाउनका लागि पाँचतारेस्तरको होटल तथा रिसोर्ट हुनुपर्छ ।योसँगै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका पाँचतारे होटलको सङ्ख्या सात पुगेको छ । एभरेष्ट होटल र फूलबारी रिसोर्ट अहिले बन्द छन् । त्यस्तै भैरहवाको पवन प्यालेस, काठमाडौँको अलफ्ट पाँचतारेका रूपमा सञ्चालन हुने तयारीमा छन् ।पाँच रुपैयाँले बनायो उद्यमी काशीराम शर्मा
बाँके, २७ माघ (रासस) ः करिब सात वर्षअघि ५ रुपैयाँबाट सुरु गरेको बचतले राप्तीसोनारीका अधिकांश महिला अहिले उद्यमी बनेका छन् । अहिले यहाँ महिला आफ्नै मेहनतमा रु. १० लाख बढीको कारोबार एक्लै गर्न सफल देखिएका छन् । घरखर्चमा समेत श्रीमान्कै भर पर्नुपर्ने विगतको बाध्यता अहिले अन्त्य भएको छ । अब श्रीमान् श्रीमतीको आम्दानीमा रमाउन थालेका छन् । सहकारीमा आबद्ध भएर बचत गर्न थालेपछि यहाँका महिलाको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको स्थानीय गङ्गा शाह बताए । उनका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिला आफैँ आत्मनिर्भर भएकैले अहिले परिवार र समाजमा सम्मानित व्यवहार पाइएको छ । घरपरिवारले थाहा पाए गाली पाउने डरले लुकेर जम्मा गरेको रु पाँचले आइतबार सक्षम र आत्मनिर्भर बनाएको राप्तीसोनारीका महिला बताउँछन् ।आत्मनिर्भर बन्नकै लागि नयाँ सिर्जनशील सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थामा सहभागी भएका यहाँका महिलालाई अहिले घरपरिवारको पनि उत्तिकै सहयोग र साथ रहेको शाहले बताए । अहिले उक्त सहकारीमा ९०४ महिला सेयर सदस्य छन् । सबैको सुरुआती अवस्था कमजोर थियो तर अहिले सबै आत्मनिर्भर भइसकेका छन् । बाख्रापालन गरेर सहकारीमा आयस्रोत जुटाएका उनीहरूले अहिले आर्थिकरूपमा परिवारलाई सघाउन सक्षम भएको बताएका छन् । मासिक रु. २५ समूहमा बुझाउनु पर्दा श्रीमान्को भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकी राप्तीसोनारी–६ की सीता पुनले अहिले आफ्नै कमाइले घरपरिवार चलाएको बताए । “आम्दानी ठिकै छ, घर खर्चको विषयमा अहिले परिवारको सल्लाह हुने गरेको छ”, उनले भने, “सहकारीले नै आत्मनिर्भर र सक्षम बनाएको हो ।” आर्थिक अभावकै कारण सात वर्षअघि श्रीमान्बाट अमानवीय व्यवहार सहनुपरेको बताउँदै शोभा परियारले भने, “अहिले श्रीमान् पनि खुशी हुनुहुन्छ ।” सहकारीको बचतले शोभाको परिवारमा परिर्वतनसँगै खुसी पनि छाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान्ले विदेशमा कमाएर पठाएको पैसा खर्च नगरी आफ्नै कमाइले घरपरिबार चलाउँदा उनीमा एकदमै आनन्द आएको छ । “उनको पैसा सकभर खर्च गर्दिनँ”, उनले भने, “आफैँले खर्च जुटाउने भएकी छु ।” मासिक रु. २०० सहकारीमा बचत गर्दै आउनुभएकी शोभाले अहिले सहकारीमा रहेर रु. १ लाख बढीको कारोबार गरिरहनुभएको छ । पछिल्लो समय बाँकेमा सहकारीको माध्यमले महिला आफैँ आत्मनिर्भर र सक्षम हुन थालेका छन् । १ लाख ६५ हजार सेयर सदस्यमध्ये ५१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको जिल्ला सहकारी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम जैसी बताए । सञ्चालनमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ । कर्मचारीमा एक हजार ६०० मध्ये ६६ प्रतिशत महिला रहेको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीले परिवारमा आर्थिक सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्ने हुँदा घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा समेत टेवा पुगेको उनको भनाइ छ ।